दार्चुलामा महाकाली बाढीको त्रास, सदरमुकाम जोगाउने तटबन्ध भासियो
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा लाखौं मूल्यका ट्रान्सफर्मर प्रयोगविहिन, गाईवस्तुको घाँस राख्ने काममा प्रयोग ।।
कञ्चनपुरमा युवतीको हत्याको आशंकामा थप एक युवक पक्राउ ।।
भारतीय नागरिकहरूले रांगाहरू चोरेर लग्दै गर्दा नेपाली पक्षले लखेटेपछि...
कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा यात्रुवाहक भ्यान एकापसमा ठोक्किदा दुई जनाको मृत्यु ।।
सन्तोष कोट्टारी, दार्चुला, २६ असार । महाकाली नदीको कटानबाट दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगालाई जोगाउने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको तटबन्ध भत्किन थालेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण महाकालीमा बहाव बढेपछि प्याकेज नम्बर १० मा तटबन्ध निर्माणका लागि राखिएको ‘गे्रभेटी रिटेनिङ वाल’ डेढ फिट भासिएको छ ।
भासिने क्रम जारी रहेमा र महाकाली नदीको बहाव बढ्दै गएमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार खतरामा पर्ने भन्दै स्थानीय त्रासमा छन् । ‘तटबन्ध निर्माण हुन थालेपछि महाकालीमा पानीको बहाव जति बढेपनि सुरक्षित हुने आशमा रहेका खलंगाबासी तटबन्ध नै भासिन थालेपछि पुनः ०७० सालको बाढीको स्मरण गरिरहेका छौं,’ स्थानीय नरेश अवस्थीले भने ।
०७० साल साउन २ गते आएको महाकाली बाढीले सदरमुकाम खलंगामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
बाढीले कुरुप बनाएको जिल्ला सदरमुकामको रिङनताल क्षेत्रमा यसपालिको बाढीले पनि तटबन्ध भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीय त्रसित भएका हुन् । उक्त वाल महाकालीले बगाउने होे भने पुनः समस्या सिर्जना गर्नसक्ने महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख सुशीलप्रसाद देवकोटाले अनुमान गरे ।
कसरी भत्कियो तटबन्धको वाल ?
रिङनताल क्षेत्रमा पर्ने प्याकेज नम्बर १० मा निर्माण गरिएको ग्रेभेटी रिटेनिङवालको सपोर्टमा नदीमा रहेका ढुंगाहरु नदीको बहावले बगाएको छ । सपोर्टको अभाव हुँदा नदीको बहाव र पानीसँगै बगेर आएका ढुंगाले वालमा लगातार हान्ने गरेको तथा तल्लो भागमा कटान गरेकाले वाल भासिन सुरु भएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा काउन्टर रिटेनिङवाल राख्ने ठाउँ नपुगेकाले ग्रेभेटी रिटेनिङवाल राखिएको थियो । ‘काउन्टर रिटेनिङवाल राख्न पाएको भए नदीले कटान गर्ने र भासिने सम्भावना कम हुने थियो,’ आयोजना प्रमुख देवकोटा भन्छन् ।
तटबन्धको अन्य प्याकेज जस्तै ठाउँ नपुग्दा राखिएको ग्रेभिटी रिटेनिङवालका कारण पनि नदीलाई कटान गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
तटबन्ध भत्क्यो भने कहाँ पुग्छ असर ?
तटबन्ध भासिनुमा तत्कालिक कारण महाकालीको बहाव बढ्नु नै भएपनि नदी पारी भारततिर गएको पहिरो पनि थप अर्को कारण रहेको स्थानीय बताउँछन् । पारीतिर भारतको पिथौरागढ जिल्लाको खोतिल क्षेत्रमा गत गएको पहिरोका कारण महाकालीको मूल प्रवाह नेपालतिर फर्किएको छ । सोही दिनदेखि नै तटबन्धमा असर परेको थियो ।
केही गरी उक्त प्याकेज नम्बर १० को ग्रेभिटी रिटेनिङवाल भासिएर नदीमा बग्यो भने चार वर्ष अगाडि महाकालीमा आएको बाढीले निम्त्याएको खतरा पुनः सिर्जना हुनेछ ।
यद्यपि उक्त प्याकेजभन्दा दक्षिणतिर १ किलोमिटर भन्दा बढी तटबन्ध निर्माण गरिसकिएकाले पहिले जत्तिकै खतरा भने नहुने आयोजना प्रमुख देवकोटा दाबी गर्दछन् । तर, घाटबजार र ग्रेभिटी रिटेनिङवाल राखिएका क्षेत्रमा भने पुनः समस्या हुने उनले अनुमान गरे ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीको पहलमा पटक-पटक भारतीय समकक्षीलाई भेटेर भारततिरको पहिरो हटाउन आग्रह गरिएको थियो ।
भारतीय पक्षले पनि नेपालतिरको गाम्भीर्यतालाई हेरेर तुरुन्तै पहिरो हटाउने जानकारी दिएको थियो । तर, नदीको मूल प्रवाह नै नेपालतिर फर्काउने गरी भारततिर गएको पहिरोलाई अहिलेसम्म हटाइएको छैन । नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त पहिरो हटाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेर औपचारिकता पूरा गर्नुबाहेक थप विशेष पहल नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुप्रसाद कोइराला भने नेपालतिरको अवस्थाबारे भारतीय समकक्षीलाई जानकारी गराएको भएपनि वर्षामा पहिरो हटाउने कार्य सम्भव नै नभएको बताउँछन् ।
हालसम्म साढे ३७ करोड खर्च, थप ८ करोड माग
भारततर्फ पहिरो गएर महाकालीको बहाव परिवर्तन भएको झण्डै ८ महिनापछि मात्रै नेपाली पक्षले तटबन्ध राख्न टेण्डर आहृवान गर्ने तयारी गरेको छ ।
भारततिर पहिरो गएको ठाउँको ठीक वारीतिर तटबन्ध राख्न मंगलबार मात्रै टेण्डर आहृवान गरिने महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘पहिरो गएको केही महिनामै तटबन्धका लागि टेण्डर आहृवान गरेको भए अहिलेसम्म आधा काम सकिन्थ्यो र महाकालीले कटान गर्ने काम पनि सहजै गर्न सक्दैनथ्यो,’ स्थानीय मदनसिंह धामी भन्छन् ।
भत्कन लागेको तटबन्धको नदीमा परे पनि थप समस्या सिर्जना नहोस् भनेर निरन्तर काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख देवकोटा बताउँछन् ।
आयोजनाले १२ प्याकेजमा तटबन्ध निर्माण कार्य गरेवाफत गत महिनासम्म ३७ करोड ५१ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष बाँकी कामका लागि ८ करोड माग गरिएको छ । भौतिक कार्य प्रगति भने ७० प्रतिशत मात्रै रहेको आयोजना प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए ।